Nsuku zonke, esibhekana ngayo inani elikhulu labantu nokubuka ukuziphatha kwabo, ngezinye izikhathi sifuna ukwazi ukuthi kwenzekani ekhanda yomunye. Cishe, amasevisi ekhethekile isiRashiya uphiko oluyisipesheli okhuluma ekutadisheni lo mbuzo ezingeni okhokhelwayo. Nokho, akukho lwazi eningiliziwe ngale.
Anelise ilukuluku lakho, ungasebenzisa entshonalanga TV ewuchungechunge, esekelwe kuphenywe ubugebengu obunobudlova kakhulu futhi eyinkimbinkimbi. Isilinganiselwa Izithameli Award weluleka ukuba banake indaba eqanjiwe ubugebengu "Criminal Minds." Abalingisi kanye izindima, indaba futhi inqubo yokuthwebula ibhayisikobho - ukwaziswa okwengeziwe ngalokhu ukubuyekeza kwethu.
Ababhali kanye abadlali "Minds Criminal" wethula kubabukeli profilers. Lona umnyango FBI ekhethekile lapho abasebenzi bekwi cwaningo yokuziphatha nemigwalo ekumeni ngokwengqondo izigebengu. profilers ithimba akubanga balifundisise ubufakazi, basebenza endaweni yesehlakalo, bezama ukuba izicathulo lomuntu ongaphilile engqondweni futhi ukubikezela isinyathelo sakhe esilandelayo.
Ngalinye isiqephu yochungechunge kuyahluka emangalisayo enengqondo. ababulali yomkhiqizo, abanukubezi akhohlakalise, abonile abasha - embodying nabo esikrinini, abadlali abanamakhono, "Minds Criminal" wagcina izilaleli ingaqiniseki kuze kube sekupheleni futhi ushiye idiphozi esindayo phezu eshaweni. Mhlawumbe lokhu kungenxa Ukuqaphela ukuthi simo le umphenyi sika kuyafana abavamile indaba yobugebengu.
Ukubuka izilinganiso ezinhle, CBS Corporation ivumile akhiqize spin-off "Minds Criminal: ukuziphatha umsolwa" (abadlali Ihlathi Whitaker, uKirsten Vangsness, Dzhanin Garofalo nabanye). Nokho, umbukiso yathatha isizini eyodwa kuphela (13 iziqephu) kanye sivaliwe, inguqulo yokuqala, ngokuphambene, wathembisa isikhathi sonyaka nanye.
Umsunguli ukuhlaziywa kokuziphatha iyunithi. UGideyoni eholwa iqembu profilers, kodwa umholi wabo olungekho emthethweni. Njengoba umeluleki kweqiniso, ukhetha ukunikeza Amacebo ezicashile ukuze kubafundi belandisa ukuthola indlela yokuphuma.
Dzheyson uGideyoni ezahlukene umcabango exuberant, okuyinto nje wamsiza ukucabanga njengesigelekeqe. indlela Izintandokazi ukuxhumana iziboshwa - a ukucasuka. Naphezu isipiliyoni omkhulu ekuvezweni bobugebengu obukhulu kakhulu, ukuhluleka isiphrofayela abanamakhono kuthatha kakhulu inhliziyo, uthambekela ukucindezeleka futhi iloli sezinzwa.
Indima umholi lolungakahleleki wahlabelela owawina lo "Emmy" futhi "kusho uTony", a lophakanyisiwe emithathu isikhathi sokuba "Golden Globe" - nomdlali wamabhayisikobho waseMelika futhi umculi Mandel Bryus Patinkin.
Ngemva yesibili ngesizini yabalingisi yochungechunge "Minds Criminal" umuzwa wokuzisola abazamukela izindaba mayelana kokushiya osebenza nabo. Nokho, iqhaza kule phrojekthi eyakufakela ugqozi kabusha umsebenzi Patinkin sika - yena salandelwa FBI ngoba CIA. Ngo-2011, Mandel Bryus waqala esebenza ifilimu serial "wobaba" e indima CIA abanolwazi.
Lapho uGideyoni ngesula profilers ubuholi division, yena salandelwa Aroni Hotchner, noma nje Hotch. Sebenza futhi ukubulawa oda kwasekuqaleni njalo kuye. Ngokungafani umeluleki wakhe Hotch impassive futhi igcina kahle imizwa ngaphansi kolawulo.
uhlamvu Hard nokuzinikela awamenzanga kusuka futhi ukuqapha isimo salo osebenza nabo. Aroni Hotchner bakhathazeka abanye, kodwa engawayekanga yena futhi isebenza kanzima - le ndlela ngokwezinga elikhulu eziyingozi empilweni yakho siqu. unkosikazi protagonist asihambisani sukuma uhambe nendodana yabo evamile.
Abalingisi "Minds Criminal" ekuqaleni ukuqopha kakade baphumelele abanye ochwepheshe. Umsebenzi uThomas Gibson (Hotchya) Yayiqala ekuseni ngempela - oneminyaka engu ubudala ubumnandi isinyathelo e yaseshashalazini zezingane. Kodwa ukuthandwa ngempela wafika Gibson, kanye indima udokotela e Neyland idrama Chicago Hope (1994-1998).
Isinyathelo esilandelayo esibalulekile ngokuba umlingisi waqala umsebenzi "Dharma & Greg" futhi abaphakanyiselwe "Golden Globe". Kusukela ngo-2005, uThomas Gibson uhlaziya ukuziphatha zingadedeli futhi ababulali serial kule umphenyi "Criminal Minds."
Rebel olulodwa Derek Morgan - elinye ilungu leqembu profilers. Eqiniseka, uhluthuke futhi ayiboni igunya, yingakho ngezinye izikhathi kwakuba izingxabano Aroni Hotchner.
Isevisi ku Marine Corps, amaphoyisa Chicago namayunithi ubunjiniyela, ibhande black e-judo engahlomile amakhono ukulwa - gcina uhlu ithalente Morgan kungaba engapheli. Abazama Derek enkulu ngempela, kodwa akaboni yena abe ngumholi.
izibukeli Ayemaningi nezilwane abazifuyile ngemva kokubukela "Minds Criminal" (1 isizini). Abalingisi kanye ekuskrini izinhlamvu zabo lwabuthana ngokuthi "halves ezimbili", futhi ezinye izici ezifanayo ngisho ezitholakele. Ngokwesibonelo, esiqintini Derek Morgan Liyindawo egcwele uthando, noShemariya Moore akazange ngisho lutho ukudlala.
Udumo Real Moore waletha owuchungechunge "The Young kanye Eyaluzayo, 'ngayo lapho inkanyezi iminyaka engaphezu kweyishumi. Ngo parallel, a Hunk abanebala elinsundu kwaholela uhlelo umculo Soul zemininingwane.
Kuyathakazelisa ukuthi ngemva yingxenye yale project "Young kanye Eyaluzayo" Shemarov ngeke ziyisayine enjalo izivumelwano zesikhathi eside. Asazi ukuthi yini zikuqinisekisa Moore Abakhiqizi "Minds Criminal", kodwa ngemva zonyaka eziyishumi, izethameli wayekujabulela ukubuka umsebenzi Derek Morgan.
Dr. Reed - ngakho abasazi omunye sephrofayela, ukuze ungeze ke kancane kusho enye incwadi. Ngempela, le nsizwa hhayi njalo athathwe ngokungathi sína, kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. Spencer Reid e yakhe engamashumi amabili nesikhombisa, ngezinga elithile ezintathu zobudokotela: isayensi yobunjiniyela kanye mathematics. inkumbulo Ingabe Ohulumeni Banalo Lonke kuyivumela khumbula omningi imininingwane, Amazing sivinini sekufundza kanye IQ 187 - kungcono kancane scary ngisho nozakwethu Reed, kodwa kancane kancane ukujwayela kuya strangeness.
Njengezinye geniuses, Spenser Ningakuvumeli kakhulu ingevu. Ngaphezu kwalokho, unina esibhedlela ngokwengqondo udokotela asaba kokuvusa bayasangana uqobo. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi insizwa kusuka ebuntwaneni unesithakazelo sciences ngqo, hhayi lokusungula, okungenza kulethe ukugula.
Abalingisi "Minds Criminal," wabona ukuthi isabelo Spencer ayinangozi wawa yisibalo esikhulu sabasebenzi esingakaze Abashona. UDkt Reed kakhulu washaywa, wathunjwa, abangu itheleleke nge -anthrax futhi iqala ukuthatha imithi.
Ngaphambi iqhaza isiteshi iphrojekthi CBS Mettyu Gray Gubler (Spencer Reid) wazama isandla sakhe design, ngezikhathi ezithile wavela ezithombeni futhi wasebenza njengesibonelo ngesikhathi ubonisa Louis Vuitton, nguyenhanh futhi Marc Jacobs.
Kungaba iphutha ukusho kanjalo iqembu Hotchya ukubhekana bebodwa. Ngokuba ukuthuthukiswa indaba ababhali bazo beveza izinhlamvu entsha "Minds Criminal" (Season 2). Abalingisi wathatha emkhayeni wabo Kirsten Vangsness okuyinto inkanyezi Penelope Garcia.
"The Queen of Information Technology" - kuyinto isiqu esinjalo uyakufanelekela le nkosazana esencane ebukekayo. Kuyamangalisa hacker abanamakhono futhi umhlaziyi - ngaphandle kosizo Penelope profilers ithimba wasebenza ngeke zizuzise kangako. Naphezu kwakho konke ezethusayo wabhekana, yena inethemba futhi kwenza ngisho smile engemuva yomkhumbi Hotchya.
Garcia futhi babe nobuhlobo obukhethekile ihlongandlebe Derek Morgan. senzo Comic, nokho, wonke amasizini futhi ayizange yaba imizwa sina. Lokho Ukudlala ngothando nokuhlale ucabanga imizwelo Penelope buhlanjululwe esindayo zeviki profilers.
Ngempilo siqu genius computer, futhi, akuhambanga kahle konke. Lithandana umenzeli FBI kusuka kwenye division wathembisa amahle, kodwa kuvela ukuthi Garcia akafuni ukushada.
Indlela ukuvuselela IDirectX ngaphandle kokuphazanyiswa
Ukuthi izindlovu letingabhukusha kanye neminye imininingwane mayelana nezindlovu